Taariikhda & Himilada - Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo Xorta ah
Gaajada-Free Oregon waa urur u doodista faqriga ee gobolka oo dhan ka jira oo leh shaqaale yar oo ka yar 15 xubnood. Waxaan fahamsanahay in hoggaanku uu ka yimaado kuwa leh waayo-aragnimada nolosha iyo in gaajada iyo faqriga aysan kaligood jirin, laakinse ay ka dhashaan nidaamyo is dulsaaran oo dulmi abuura lakabyo mudnaan iyo sinaan la'aan ah.
qiyamkayaga iyo shaqadeenu waxay xuddun u yihiin abuurista isbeddello habaysan si loo dhammeeyo gaajada, oo ay ku jiraan dib-u-qaybinta agabka iyo awoodda bulshooyinka ay si aan xad lahayn u saameeyeen rabshadaha Gobolka. Ma doonno inaan jaarkeena uun quudino, ee waxaan raadinaa xornimo la wadaago laga bilaabo nidaamyada dulmiga, sida midab-takoorka, dabaqadda, cissexism iyo noocyada kale ee rabshadaha, taas oo u oggolaan doonta dhammaan inay koraan. Si taas loo gaaro, shaqaalahayaga iyo guddiga waxay la shaqeeyaan qiyamka ururinta, daacadnimada iyo sinnaanta.
Sheekada Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta waxay dib u bilaabantay 1989-kii, markii Sharci-dejinta Gobolku abuuray Hawl-wadeennada Gaajada Oregon. Waqtigaas, Oregon wuxuu heer sare ka galay gaajada heer qaran, sharci-dejintuna waxay ku dhawaaqeen "Dhammaan dadku waxay xaq u leeyihiin inay gaajada ka xoroobaan."
Tobannaankii sano ee la soo dhaafay kooxdan oo ka kooban 20+ u doodeyaal, bixiyeyaasha adeegga bulshada, hay'adaha gobolka iyo saraakiisha la soo doortay waxay si joogto ah u riixayeen siyaasadaha, barnaamijyada, cilmi-baarista iyo maalgashiga si wax looga qabto sababaha asaasiga ah ee gaajada.
Sannadkii 2004tii, Kooxda Hawsha ayaa soo ururisay fikrado dadka reer Oregon ee gobolka oo dhan si ay u horumariyaan sharciga lagu joojinayo gaajada, iyaga oo qeexaya "40 siyaabood oo 5 sano gudahood lagu sameeyo isbeddel," iyo in la siiyo gobolka qorshe hawleed lagu dhimayo heerka gaajada aadka u sarreeya ee Oregon. .
Qorshahani waxa uu noqday qalab abaabul oo muhiim u ah u doodayaasha ka hortagga gaajada ee gobolka oo dhan. Sannadkii 2006 deg-degga dhibaatada iyo fursadda horumarku waxay faray xubnaha Hawl-galka Gaajada Oregon inay bilaabaan urur aan faa'iido doon ahayn oo gaar loo leeyahay, Partners for a Hunger-Free Oregon, kaas oo shaqaalahiisu ay bixin doonaan awoodda ay ku caawiyaan hirgelinta talooyinka Xeerka joojinta gaajada.
Tan iyo markaas kooxdan gaarka ah ee hawl wadeenka guud iyo hay'adda aan macaash doonka ahayn ee gaarka loo leeyahay waxay soo saareen xog cusub oo ku saabsan qorshaheeda gobolka. Waxaan si wadajir ah u sii wadnay inaan diirada saarno yoolalka mustaqbalka fog ee wax ka qabashada sababaha asalka u ah gaajada si dadka Oregon ay u iibsadaan cuntada ay u baahan yihiin, iyadoo la kordhinayo helitaanka cuntada iyada oo loo marayo barnaamijyada taageerada nafaqeynta.
Anagoo kaashanayna la-hawlgalayaasheena, waxaan gacan ka geysannay qaabeynta habka Oregon uga jawaabto arrinta gaajada.
Waxaan leenahay rikoor adag oo saameyn ku leh siyaasadaha dadweynaha si loo hagaajiyo barnaamijyada ka hortagga gaajada iyo maalgelinta xalalka faqriga. Sannad kasta, waxaan ka caawinnaa isku xirka kumanaan caruur ah cunto caafimaad leh sanadka oo dhan waxaana siinaa macluumaadka ku saabsan SNAP tobanaan kun oo reer Oregon ah. Waxaan tababarnaa oo aan qalabeynaa la-hawlgalayaasha maxalliga ah si ay xal ugu helaan gaajada bulshooyinkooda. Waxaan isugu yeernaa khubarada naxdinta leh ee Kooxda Howlaha Gaajada Oregon si ay tallaabo wadajir ah u qaadaan.
Soo ogow waxa aan qabanay sanadkii hore
Eeg Warbixinta Sannadlaha ah